Tuesday November 28, 2017 - 07:33:39 in Wararka by Super Admin
Warbixin cusub oo ay soo saartay Hay'adda Qaxootiga Norway ayay uga dardaar warisay barakaca iyo baaba'a ay geysanayaan duqeymaha diyaaradaha dagaalka Mareykanka ka wadaan gobollada shabeelooyinka.
"Basra ayaan ka soo qaxay, waxan ka soo qaxay dagaal iyo rabsho iyo hubka la isku ridayay, caruurta ayaan la soo baxsaday, dadkeenii, beertinii iyo dhulkeenii ayaan ka soo tagnay, inta ayaana ku dhibaataysannahay, waa soo dhibtoonay, dhib inooma harsana." ayay tiri haweenay BBC uwarrantay.
Hay'adda NRC ayaa warbixinteeda ku sheegtay in dad ku dhow 10-kun oo qof shacab ah ay ku barakaceen dagaallo ay ku lug lahaayeen ciidamo Mareykan iyo AMISOM waxayna ku baaqday in lakaalmeeyo dadkaas kasoo firxaday deegaanka Basra oo hodon ku ah wax soo saarka beeraha.
Dowladda Federaalka oo sheegata in ay mas'uul ka tahay dalka soomaaliya ayaa indha u ah cadawga shisheeye ee xasuuqa ku haya shacabka soomaaliyeed.